Siphephe kangakanani eminyakeni engamashumi amabili ngemuva kukaSepthemba 11? Kuyamangaza!
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Wtn » Siphephe kangakanani eminyakeni engamashumi amabili ngemuva kukaSepthemba 11? Kuyamangaza!
Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Izindaba zikaHulumeni • Industry Hospitality Industry • Human Rights • Izindaba • Abantu • Ukwakha kabusha • Ukuphepha • ezithrendayo Manje • I-USA Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezihlukahlukene • Wtn
by UDkt Peter E. Tarlow
UDkt. Peter Tarlow, umongameli WTN
Ibhalwe ngu UDkt Peter E. Tarlow
Ukuhamba namuhla kunzima kakhulu kunaseminyakeni engamashumi amabili edlule. Eqinisweni, imboni yezokuvakasha isishintshe kakhulu futhi ishesha kakhulu kangangokuba cishe noma yini eshiwo ngayo iphelelwa isikhathi ngokushesha. Eminyakeni engamashumi amabili eyedlule, bambalwa ababengacabanga ngengozi yezomnotho nokufa okwabangelwa yi-COVID-19, noma ukulawula umphakathi okwabangelwa yilo bhubhane. Ukubeka izinto ngendlela efanele, ngoSepthemba 11, 2001, kwafa abantu abangaphezu kuka-3,000 19 ngosuku olulodwa. Manje eminyakeni engu-COVID-4, lolu bhubhane selubulale abantu abangaphezu kwezigidi ezine.
The I-World Tourism Network UMongameli, uDkt. Peter Tarlow, ukhiphe umbiko ongaconsi phansi okhombisa iminyaka engama-20 kusukela ngoSepthemba 11, 2001, nangendlela izwe lezokuvakasha nezokuvakasha ebelishintsha ngayo.
Yize abantu abaningi besazikhumbula lezo zinsuku ezibuhlungu, manje sekukhona isizukulwane sonke esazalwa ngemuva kukaSepthemba 11, 2001. Kubo i-9/11 ngumlando owenzeka kudala.
Ubhadane lwe-COVID-2020 lwango-21 lwadala izinselelo ezintsha zezokuvakasha. Kubantu abaningi abasha abakwazi ukucabanga ngomhlaba wokuhamba ngaphandle kwemingcele futhi abaningi kakhulu abazi ukuthi isisekelo semikhawulo yethu eminingi yokuhamba sinomsuka walokho okwenzeka ngoSepthemba 19, 11.
Eminyakeni engamashumi amabili edlule, ezokuvakasha nezokuvakasha seziyabona ukuthi ukucabanga okudala kokuthi “ezokuphepha akungezeli lutho emgqeni wokuqala” akusaziphathimandla zezokuvakasha ezisebenzayo namuhla zibona ezokuphepha njengengxenye ebalulekile yemizamo yazo yokumaketha. Ukuphepha nezokuvakasha kwezokuvakasha, okwake kwaba yingane yokutholwa yomhlaba wezokuvakasha nezokuvakasha, manje sekuyingxenye ebalulekile yomkhakha.
Amakhasimende ezokuvakasha nezokuvakasha awasakwesabi ukuphepha; bamukela zonke izici zayo, kusuka ezinyathelweni zokulwa nobushokobezi kuya ezindabeni zezempilo yomphakathi. Abahambi babuza abathengisi ngayo, bafunde ngayo, futhi basebenzise izindlela zokuphepha njengengxenye enkulu ekuthathweni kwezinqumo ngohambo. Ngaphezu kwalokho, ku-COVID-19, umphakathi manje ubheka izinyathelo zezempilo njengengxenye yezokuphepha kwezokuvakasha.
Enye yezindlela le nkathi entsha yokuphepha eza ngayo ukukhula kwamabutho ezokuphepha azimele (futhi aziwa kwezinye izingxenye zomhlaba njengamaphoyisa ezizimele).
Ukuphepha kwangasese, kanye nama-TOPPs (amayunithi aqondisa ezokuvakasha kanye nomsebenzi wokuvikela) amayunithi manje abe izithako ezibalulekile embonini yezokuvakasha ephumelelayo. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi emazweni, njengase-United States nasezingxenyeni ezithile zeLatin America, lapho kunemizwa yokulwa namaphoyisa ephelezelwa amagagasi obugebengu andayo nasezindaweni eziqonde kakhulu ukuvikelwa.
Yize le mibutho yezokuphepha yangasese ingenalo ilungelo lokuboshwa ngaso sonke isikhathi, kepha ihlinzeka ngokuba khona nesikhathi sokuphendula ngokushesha.
Njengalokhu, esikhathini sokukhula kokungaqiniseki kwezepolitiki nezomnotho, ukuphepha kwangasese kwezinye izindawo zezokuvakasha sekuyinto ongayibheka.
Kubuye kwaba yindlela ongayinaka ohulumeni bamadolobha ababhekene nesifiso somphakathi sokuvikelwa kanye nokukhululeka emithwalweni esindayo yentela. Eminyakeni engamashumi amabili edlule, umphakathi usulindele uhlobo oluthile lokuvikeleka hhayi kuphela ezikhumulweni zezindiza kepha ezindaweni ezinjengezitolo, izindawo zokuzijabulisa / amapaki, izindawo zokuhamba, amahhotela, izikhungo zemihlangano, imikhumbi yezokuvakasha, nemicimbi yezemidlalo.
Ngaphandle kokuthuthuka okuningi emhlabeni wezokuphepha kwezokuvakasha kanye nama-TOPPs, kuningi okusamele kwenziwe.
Sisebenza kanjani embonini yezokuvakasha emashumini eminyaka edlule
Mhlawumbe ayikho ingxenye yezokuvakasha eye yathola ukunakwa okuningi emhlabeni wonke njengemboni yezindiza. Iminyaka engamashumi amabili edlule ibe nezikhathi ezinhle nezimbi embonini yezindiza, kwathi u-2020 waba mkhulu kakhulu embonini yezindiza. Akungabazeki ukuthi izindiza zezindiza ziyingxenye ebalulekile yezokuvakasha: ngaphandle kokuthuthwa komoya, izindawo eziningi zimane zife, futhi ithrafikhi yomoya iyingxenye ebalulekile yebhizinisi lezokungcebeleka kanye nezentengiselwano, ukuhamba ngezebhizinisi kanye nokuthunyelwa kwempahla.
Ukuhamba ngendiza namuhla akukuhle kangako kunaseminyakeni engamashumi amabili nanye edlule noma eminyakeni emibili edlule. Abahambi abaningi babuza ukuthi ngabe zonke lezi zinyathelo ziyadingeka yini noma bayazibuza ukuthi kungenzeka ukuthi azinangqondo, zimosha, futhi azinamqondo. Abanye banombono ophikisayo. Esikhathini sobhadane lwezifo, ukuphepha kohambo lomoya akuyona nje eyokuvikela indiza, kodwa futhi nokuqinisekisa ukuthi amatheminali ahlanzekile futhi ukuphatha imithwalo akusabalalisi izifo.
Hhayi nje kuphela ukuthi imithethonqubo emisha yezokuphepha yenze impilo yaba nzima kubahambi, kepha futhi nezinhlobo eziningi zamakhasimende zenqabile. Ukusuka ekudleni kuya ekumoyizelweni, izindiza zezindiza zimane zinikeze okuncane futhi kuvame ukubonakala zingenandaba nendlela abaphatha ngayo umphakathi. Ngakho-ke, kuyadumaza ukuthi kuncane kakhulu okufeziwe ekuphepheni kwezokuthutha emoyeni. Amakhasimende amaningi kakhulu azibuza ukuthi ukuphepha kwezindiza kusebenza kahle yini kunokusebenza.
UDkt Peter E. Tarlow
UDkt.Peter E. Tarlow uyisikhulumi nodumile emhlabeni wonke onguchwepheshe bomthelela wobugebengu nobuphekula embonini yezokuvakasha, ezenzakalweni nasekuphathweni kwezinhlekelele kwezokuvakasha, kanye nezokuvakasha kanye nentuthuko yezomnotho. Kusukela ngo-1990, uTarlow ubelokhu esiza umphakathi wezokuvakasha ngezinkinga ezifana nokuphepha kwezokuvakasha nokuvikeleka, ukuthuthukiswa komnotho, ukumaketha okudala, kanye nomcabango wokudala.
Njengombhali owaziwayo emkhakheni wezokuphepha kwezokuvakasha, uTarlow ungumbhali ofaka isandla ezincwadini eziningi eziphathelene nezokuphepha kwezokuvakasha, futhi ushicilela izindatshana eziningi zocwaningo ezifundiswayo nezisetshenzisiwe maqondana nezindaba zokuphepha kubandakanya izindatshana ezishicilelwe kwiThe Futurist, iJournal of Travel Research kanye Ukuphathwa Kwezokuphepha. Izindatshana ezahlukahlukene zikaTarlow zobungcweti nezifundiswa zifaka izindatshana ezikhuluma ngezihloko ezinjengalezi: “ezokuvakasha ezimnyama”, imibono yobuphekula, kanye nentuthuko yezomnotho ngezokuvakasha, inkolo nobuphekula kanye nezokuvakasha kwezikebhe. UTarlow ubuye abhale futhi ashicilele incwajana yezokuvakasha eku-inthanethi edumile iTourism Tidbits efundwa yizinkulungwane zabasebenzi bezokuvakasha nabezokuvakasha emhlabeni wonke ngezihumusho zayo zolimi lwesiNgisi, iSpanish nolwesiPutukezi.